कपाल झर्ने समस्या छ ? अपनाउनु यी उपाय - Civil Khabar
कपाल झर्ने समस्या छ ? अपनाउनु यी उपाय
by civilkhabar २०७८ असार ४, शुक्रबार ०९:५३ 0
उमेरले ३० कटेका अधिकाशं युवामा अहिलेको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो कपाल झर्नु । यसरी जवानी मै कपाल झरेपछि पुरुषकालागि यो ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । युवावस्थामै तालु नदेखियोस् भन्न पुरुषहरुले केहि घरेलु उपाय अपनाए कपाल झर्ने समस्या समाधान हुन्छ ।
पुरुषको कपाल झर्न रोक्न नरिवलको तेल, अण्डा, एभोकाडो, सुन्तलाको जुस, घ्यू कुमारी, निम, हेन्ना, मह, मरिच, भिनेगर र कागतीको जुसको प्रयोग गर्ने सकिन्छ । साथै नियमित तेलले मालिस गर्दा पनि कपाल पलाउन लाभ पुग्दछ । khabarhub
मनाङ्गमा फसेका मुख्यमन्त्री पाेखरा पुगे, आजै विश्वासकाे मत लिने
स्थायित्वका लागि मलाई विश्वासको मत दिनुहोस् : मुख्यमन्त्री नेपाली पोखरेल
प्रहरी र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप, डीएसपीसहित ४० बढी घाइते
civilkhabar २०७७ आश्विन २८, बुधबार १७:०२
civilkhabar २०७७ मंसिर २०, शनिबार ०९:०६
नेपाल यातायात मजदुर संघको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
civilkhabar २०७७ मंसिर १२, शुक्रबार ०९:०८